အကောင်းဆုံးလုပ်ငန်းသုံးဆော့ဖ်ဝဲ?? - EWhale Myanmar
eWhale Myanmar presents e-lottery solution to the Myanmar Government
eWhale Myanmar and the Ministry of Finance, Myanma
﻿အရသာပြတင်းပေါက် App ရဲ့အသုံးဝင်ပုံများ
Application Development Agreement Signing Ceremony with Food Magazine Myanmar
Video & Magazine Reader App ရေးဆွဲ
ဒီမေးခွန်းကို 𝐐𝐮𝐨𝐫𝐚 ဆိုတဲ့ အမေးအဖြေ site ထဲမှာ G2 Crowd ရဲ့ CMO တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ 𝘙𝘺𝘢𝘯 𝘉𝘰𝘯𝘯𝘪𝘤𝘪 ဖြေကြားခဲ့တာကို မျှဝေချင်ပါတယ်...
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာ တကယ်လက်တွေ့အသုံးမဖြစ်တဲ့ဆော့ဖ်ဝဲများကို မှားယွင်းဝယ်ယူပြီး တစ်နှစ်ကို ဒေါ်လာဘီလျီယံနဲ့ချီပြီး ဆုံးရှုံးနေကြပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ဆုံးရှုံးမှုပမာဏမှာ ဘီလျံယံဒေါ်လာ ၃၀ အထိရှိနေပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်တာကတော့ လုပ်ငန်းတွေဟာ ဆော့ဖ်ဝဲရွေးချယ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေး အရမ်းများပြားလာ၍ ဖြစ်မယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲဈေးကွက်မှာက products ပေါင်းထောင်ချီရှိ၍ ဈေးကွက်ကလည်းအချိန်နှင့်အမျှ ပိုမိုကြီးမားလာနေသည်။
ဒီလို မလိုအပ်တဲ့အသုံးစရိတ်တွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းတိုင်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲမဝယ်မှီ အောက်ပါမေးခွန်းနှစ်ခုဖြင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်သည်။
၁။ ငါတို့လိုအပ်တာ ဘယ်လိုဆော့ဖ်ဝဲလ်အမျိုးအစားလဲ?
သင့်ကုမ္ပဏီ၊ သင့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို အတိအကျ သီးခြားရွေးထုတ်ပါ။ အဲ့ဒီအခါ 𝚜𝚊𝚕𝚎𝚜 လား, 𝚖𝚊𝚛𝚔𝚎𝚝𝚒𝚗𝚐 လား, 𝙲𝚁𝙼 (𝚌𝚞𝚜𝚝𝚘𝚖𝚎𝚛 𝚛𝚎𝚕𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚜𝚑𝚒𝚙 𝚖𝚊𝚗𝚊𝚐𝚎𝚖𝚎𝚗𝚝)လား, 𝙷𝚁 အတွက်လား စသဖြင့် အမျိုးအစားသေချာသိသွားပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမဲ့ category တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာလည်း နောက်ထပ်အမျိုးအစားပေါင်းမျိုးစုံ ရှိပါသေးတယ်။ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့လိုအပ်ချက်အရ အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်အရာကို သေချာအချိန်ပေးစဉ်းစားသင့်ပါသည်။
ဥပမာပြောရရင် sales အတွက်ပဲဆိုပါစို့။ သင်ဟာ emails တွေ track လုပ်ဖို့လိုအပ်တာလား? coaching software ပဲလိုတာလား? ဒါမှမဟုတ် သင့်ဈေးကွက်မှာ လောလောလတ်လတ်ရှိနေတဲ့ software တွေကို track လုပ်ဖို့ CRM software လိုအပ်နေတာလား? ဒီလိုမျိုး လိုအပ်ချက်တွေကို တက်နိုင်သမျှ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ပေးပါ။
၂။ လူဘယ်နှစ်ယောက် သုံးမှာလဲ?
ဒုတိယအချက်အနေနှင့် သင့်ကုမ္ပဏီအရွယ်အစားနှင့် သင့် team အရွယ်အစားကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ သင်ဟာ အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလား? အလယ်အလတ်လုပ်ငန်းလား? ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းကြီးကလား? ဝန်ထမ်း ၅၀ အောက်ဆိုရင်တော့ အသေးစားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ၁၀၀၀ နှင့်အထက်ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းကြီးဆိုတာသေချာပါတယ်။
အကယ်၍ သင့် မားကတ်တင်းမှာ ဝန်ထမ်း ၃၀ လောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်မားကတ်တင်းဆော့ဖ်ဝဲလ်ထဲမှာ သင့်ဝန်ထမ်းအယောက် ၃၀ တိုင်း အသုံးချနိုင်တဲ့ feature တွေပါဝင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုရွေးချယ်ပါ။ အကယ်၍သင့်အဖွဲ့မှာ လူအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ all-in-one ဆော့ဖ်ဝဲလ်လေးရှိရင် လုံလောက်ပါပြီ။
နာမည်ကြီးဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဆိုတာလည်း ကုမ္ပဏီအရွယ်အစားတွေနဲ့အပေါ်လိုက်ပြီး အသုံးဝင်ပုံမတူညီကြပါ။ တစ်ချို့ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွေဟာ နာမည်ကြီးလူကြိုက်များပေမဲ့ အသေးစားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ မကိုက်ကြပါ။
𝘙𝘺𝘢𝘯 𝘉𝘰𝘯𝘯𝘪𝘤𝘪 ရဲ့နောက်ထပ်လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ဈေးကွက်ထဲမှာ အလျင်အမြန်ကြီးထွားနေတဲ့ products တွေဟာ သင်မကြားဖူးသေးတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက ထုတ်လုပ်ထားကြတာများပါတယ်။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဆော့ဖ်ဝဲလ်က start-up တစ်ခုဆီက လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး စာကြွင်းအဖြစ်ပြောပြချင်တာက တစ်ခုတည်းလက်မခံပါနဲ့။
သင်ဟာ ဆော့ဖ်ဝဲလ်တစ်ခုစသုံးမိပြီဆိုတာနှင့် နောက်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုသုံးဖို့ လိုလာတဲ့အခါမှာလည်း သင့် အရင်ဆော့ဖ်ဝဲလ် ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့အဖွဲ့ကထုတ်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ပဲ ဆက်လက်သုံးချင်စိတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်…အဲ့ဒါလည်းမှားတော့မမှားပါဘူး…ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီတွေဟာ သူတို့ customers တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို အမြဲနားထောင်ပြီး customers တွေနဲ့ အမြဲတမ်း keep in touch ဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်လက်ရှိ ဆော့ဖ်ဝဲလ် provider က သူ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်နောက်တစ်မျိုး ရောင်းဖို့ ပိုအခွင့်အလမ်းရှိတာပေါ့။
သို့သော် အမြဲတမ်းသင့်လုပ်ငန်းအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်အရာကို လေ့လာပါ၊ စုံစမ်းပါ။ အသစ်အသစ်သောအရာတွေကို အမြဲတမ်းမျက်ခြေမပျက် စောင့်ကြည့်နေခြင်းဟာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်းကိုလည်း တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
မှန်ပါတယ်...စားသုံးသူအနေနှင့် ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ ရိုးရှင်းလျင်မြန်စွာ ဝယ်ယူနိုင်တာကိုပိုကြိုက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမေဇုန်မှာ တစ်ခုခုဝယ်ဖို့ ရှာဖွေတယ်ဆိုပါစို့…category ထဲဝင်ကြည့်၊ အကျော်ကြားဆုံး ပစ္စည်းကိုရှာ၊ ဈေးနှုန်းကြည့်ပြီး အဆင်ပြေတာနဲ့တန်းဝယ်လိုက်ကြတာပဲ။
ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာ တာဝန်တွေကိုယ်စီဖြင့် အမြဲတမ်းအလုပ်ရှုပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အလွယ်နည်းနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရွေးချယ်ချင်ကြတာပေါ့။ သို့သော် အလွယ်နည်းမလိုက်စေချင်ပါ။ သင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်လိုအပ်ချက်ကို ပိုပြီးတိတိကျကျ သတ်မှတ်လေလေ၊ သင်နှင့်နည်းတူ အခြားလုပ်ငန်းတွေ ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေ နားထောင်လေလေ၊ သင်ငွေဆုံးရှုံးနိုင်ခြေနည်းလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။
945/B, Kyike Waing Pagoda Road, Thamine( Near Ye' Yan Aung Bus Stop),Yangon